» “लाज भयो भनेर, सारीले मुख, छोप्दा के हुन्छ, प्रचण्ड जी ? हेक्का छ ? “लाज भयो भनेर, सारीले मुख, छोप्दा के हुन्छ, प्रचण्ड जी ? हेक्का छ ? – हाम्रो खबर
“लाज भयो भनेर, सारीले मुख, छोप्दा के हुन्छ, प्रचण्ड जी ? हेक्का छ ?
2021, November 6th, Saturday
हाम्रोखबर संवाददाता 241 Views
“चर्चित राजनितिक विश्लेषक डा प्रेम शर्माले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गरेर कडा प्रश्न गरेका छन् ।”
“डा शर्माले प्रचण्डलाई लाज भयो भनेर सारीले मुख छोप्दा के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रचण्डको व्यवहारहरु त्यस्तै खालको देखिँदै गएको उनले बताएका छन् । जसको आफ्नै राजनितिक भविश्यको ठेगान छैन उसले अर्कालाई हराँउछु भन्दै हिडुनु भनेको त्यहि भएको शर्माले बताएका छन् ।”
“ओटीभी नेपाल डट कम सँगको विशेष कुराकानीमा डा शर्माले आगामी निर्वाचन पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको हरिबिजोग हुने ठोकुवा गरेरका छन् । प्रचण्ड र नेपाललाई डा शर्माले सौताको रिसले श्रीमानको नाक काट्ने मान्छे समेत भनेका छन् ।”
“कुराकानीकै क्रममा डा शर्माले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजिनामा दिनु पर्ने बताएका छन् । दोषी हो भने दुवै जना बराबर दोषी भएको शर्माले बताएका छन् ।”
“ओटीभी नेपाल डट कम सँगको विशेष कुराकानीमा राजनितीक विश्लेषक डा शर्माले चोलेन्द्र मात्रै जुठो देउवा चोखो कसरी हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । भाग खाने चाँही दोषी उसले राजिनामा दिनु पर्ने अनी दिने चाँही निर्दोष रु यो हुन सक्दैन उनले भनेका छन् ।”
“कसैले राजिनामा माग्दैमा दिँदै हिड्नै नहुने पनि डा शर्मा बताए । राजिनामा दिन्न महाअभियोग आउँछ भने सामना गर्न तयार छु भन्ने प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अडान सहि भएको भन्दै डा शर्माले समर्थन गरेका छन् ।”
“राणाको राजिनामा मागेर उफ्रनेहरुलाई राजनितिक विश्लेषक डा शर्माले फ्याउराहरु भनेका छन् । फ्याउराहरुले माग्दैमा राजिनामा दिन नहुने उनले बताए । संविधानलेनै प्रधानन्यायाधिश कसरी बन्छ र कसरी बाहिरिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै बमोजिम हुनु पर्ने उनले बताए ।”
“चोलेन्द्र दोषी नै हन् भने दलहरुले महाअभियोग लगाउँने हिम्मत किन गर्दैनन् भन्दै उलने प्रश्न गरेका छन् । यो सब बार्गेनिङको खेल भएको भन्दै डा शर्माले महाअभियोग नआउँने बुझेरनै राणाले राजिनामा दिन्न महाअभियोग सामना गर्न तयार छु भनेको बताए ।”
“प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताहरु उचालेर राजिनामा माग्न लगाएको र आफु चाँही बचाउ गर्दै हिडेको भन्दै भाग लिने र दिने काम साझेदारीमा भएकाले महाअभियोग नआउँने र चोलेन्द्रले राजिनामा पनि नदिने सम्भावना प्रवल रहको उनले बताए ।”
“राजिनामा माग्नेलाई फ्याउराहरु भनेका डा शर्माले अब उनीहरु चिसै पानीले नुहाउँन बाध्य हुने बताए । न्यायाधिशहरु इजलासनै बहिस्कार गरेर बस्ने वकिलहरु बहसनै गर्दैनौँ भन्ने यो वाइयात कुरा हो भन्दै शर्माले उनीहरु कसैको इसारामा उचालिएर यसो गरेको दाबी गरे ।”